Ngerabha Mats, yerabha Mats abe ngangaloo mahashe, yerabha Mats For Equine - Kingtom
ipiyano irabha for Equine Pool
ipiyano irabha for exercisers ihashe
ipiyano irabha endleleni zangaphakathi nangaphandle
ipiyano irabha for Racecourse Tunnel
Ngerabha ipiyano ukuba izitali
I-Xiamen Kingtom Rubber-Plastic Co, Ltd yasekwa ngokusemthethweni ngonyaka ka-1996. Iminyaka, iKingtom ibilingene ekuphuhliseni iziphumo zeR & D kunye neenkonzo ezilungileyo zabathengi zerabha kunye neemveliso zeplastiki. Sidale uphawu lwe-KINDDI Ngo-2002.
Ngerabha Mats For izitali
Horse Esitalini yerabha Mat
EPDM pellet irabha emethini ukulungiselela ihashe
ipiyano irabha ngehashe ezinzileyo
No.5 Ma'an endleleni, Tong'an kanzulu Industrial Estate, Xiamen, China
Ifeksi: 86 592 5742480
KINDDI EPDM Material ROHS Ingxelo yovavanyo
I-Xiamen Kingtom Rubber-Plastic Co, Ltd yasekwa ngokusemthethweni ngonyaka ka-1996. Iminyaka, iKingtom ibilisiwe ekuphuhliseni iziphumo zeR & D zeenkonzo ezincomekayo kunye neenkonzo ezincomekayo zabathengi kwirabha nemveliso yeplastiki ...
Umnyhadala weQhosha lokuTyhinga iSikebhe laseTshayina ...
Umnyhadala we-Dragon Boat festival, okwabizwa ngokuba nguMthendeleko waseDuanwu, ubhiyozelwa ngomhla wesihlanu kwinyanga yesihlanu ngokwekhalenda yaseChina. Lo mbhiyozo kukhumbuza ukusweleka kuka-Yuan, umntu othe nkqo nozimeleyo ...
IMIYALELO YOKUZIPHATHA NGOKUGQIBELA ...
I-1: Ukulungiselela ngaphambi kokuyila 1.1 Phanda kwaye uzobe umda womhlaba ojikelezayo (eludongeni). Iphepha le-Rubber kufuneka liboniswe ngaphambili kwisoftware ye-CAD ngokwemizobo ephononongiweyo. Ukunciphisa ukusika inkunkuma, ukuthatha ...
Imozulu yamahashe yemozulu ebangelwe yi-COV ...
Ngelixa ubhubhane we-COVID-19 uyekile ukusebenza phantse kuyo yonke imicimbi yezemidlalo eJapan, ukhuphiswano lwamahashe yeyona nto inqabileyo. Imidyarho, ewe, ibibanjelwe phantsi kwezikhokelo ezingqongqo kakhulu, kodwa uMdyarho woMdyarho waseJapan ...
© Copyright - 2019-2020: All Rights Reserved. iveliso ezifakiwe- Sitemap.xml - AMP Mobile